Iphrinta ye-UV ephathekayo e-EPSON China Manufacturer
Incazelo:Iphrinta ye-UV ephrintiwe diy,Iphrinta ye-UV ephrintiwe e-Dubai,Iphrinta ye-UV ephathekayo Ebay
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-UV > Iphrinta ye-UV ephepheni > Iphrinta ye-UV ephathekayo e-EPSON
Ukuphakama kwemishini yephrinta ye- UV ejwayelekile ye-75cm, isithombe sokunyathelisa eside ubude buka-60cm, ububanzi bomshini ngu-28cm, nje kungaphrinta isithombe se-60cm ububanzi ngesikhathi esisodwa. I-inki, eyakhelwe ikhava yeselula, isikhumba, izimpawu, amabhokisi okukhanya, ukunikezwa kwamandla weselula, i-flash memory disk, ibhodi le-KT, itshe njalo njalo, banobuhle bemvelo futhi akulula, kungagcina ngaphezulu kuka-10 iminyaka.
Iphrinta ye-UV ephathekayo i-EPSON uhlobo oluthile lokusebenzisa imishini yedijithali ye-"ye-non-contact" ye-jet, iphrinta ye-UV ephathekayo isetshenziswa kakhulu. Ukusebenzisa amadivayisi asekela i-UV inkinobho, ngaphezu kwendwangu ayikwazi ukuphrinta, cishe zonke ezinye izinto (ikhava yefoni, isikhumba, izimpawu, amabhokisi amancane, ukunikezwa kwamandla weselula, i-flash memory disk, ibhodi le-KT, itshe, i-gel silika, izinkuni, i-ceramic, i-crystal, i-acrylic, i-PVC, i-ABS njll.) impahla ingaba umshini wokunyathelisa umbala, uqedile ngokumelana nokumelana, ukumelana nokugqoka, ukumelana nokushayeka. Ukuze uzuze umqondo weqiniso we-seal, akukho ipuleti, u-spray owomile, isithombe esiphelele sombala.
Izici eziwusizo zephrinta lethu le- UV eliphambili e-Dubai RF-A3UV:
Iphrinta ye-UV ephrintiwe diy Iphrinta ye-UV ephrintiwe e-Dubai Iphrinta ye-UV ephathekayo Ebay Iphrinta ye-UV ephrintiwe e-India Iphrinta ye-UV ephrinti eDelhi Iphrinta ye-UV ephrintiwe kabusha Iphrinta ye-Konica UV ephrintiwe Iphrinta ye-UV ephrinti eLahore